ဂျီချန်ဝု - ဝီကီပီးဒီးယား
At the press conference of The K2, September 2016
(1987-07-05) ဇူလိုင် ၅၊ ၁၉၈၇ (အသက် ၃၄)
Anyang, Gyeonggi, Gyeonggi Province, South Korea
ဂျီချန်ဝု(၅ ဇူလိုင် ၁၉၈၇ မွေး)သည် တောင်ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်တဦး ဖြစ်သည်။ ထပ်ပြုံးဇာတ်လမ်းတွဲ(၂၀၁၀-၂၀၁၁)၌ ဒုန်းဟယ် အဓိကဇာတ်ရုပ်ဖြင့် စတင်ထင်ရှားလာပြီးနောက်၊ စစ်သည်တော်ဘက်ဒုန်းဆူ(၂၀၁၁)၊ ဘုရင်မကြီးကီ(၂၀၁၃-၂၀၁၄)၊ ဟီးလား(၂၀၁၄-၂၀၁၅)၊ ကေတူး(၂၀၁၆)နှင့် မှုခင်းအက်ရှင်ဖြစ်သော လံကြုပ်မြို့(၂၀၁၇) တို့၌ ပါဝင်လာသည်။
၂.၁ ၂၀၀၆-၂၀၀၉၊ အစ
၂.၂ ၂၀၁၀-၂၀၁၂၊ လူကြိုက်များလာခြင်း
၂.၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၇၊ ပြည်ပထိ ထိုးဖောက်ခြင်း
အရပ် ၁၈၂ စင်တီ
ကိုယ်အလေးချိန် ၆၅ ကီလို
ဒန်းကုတက္ကသိုလ်မှ ပါဖောမင့်အနုပညာဖြင့် ဘွဲ့ရ။
အထက်တန်းကျောင်းဘဝကတည်းက သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ရန် ရည်မှန်းခဲ့၍ ဒန်းကုတက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထား။
မိမိ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ရွေးချယ်မှုကို မိခင်က သဘောမတူ​ခဲ့၍ အိမ်က ဆင်းခဲ့။
အကြိုက်ဆုံး အစားအစာမှာ ထမင်း၊ ချစ်သူရည်းစားက လုပ်ပေးတာကို ခံချင်သော ဟင်းလျာမှာ ပြောင်းဖူးမုန့်၊ လိမ္မော်သီးကို ကြိုက်သည် ဖြစ်ရာ ဆောင်းရောက်သည့်အခါ လိမ္မော်သီးကို လက်ကပင် မချ။
မုန်လာဥနီ မကြိုက်သောကြောင့် စား၍မရ။
လူပျိုကြီးရဲ့ဟင်းရွက်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်း အကောင်းစားအစားအသောက်များကို တဦးတည်း တိတ်တဆိတ် ခိုးစားပစ်ခဲ့။
ကလေးဘဝကပင် အားကစားဝါသနာ ပါသည် ဖြစ်၍၊ ဘက်ဒုန်းဆူဇာတ်လမ်း ရိုက်ကူးစဉ် နည်းပြမှ ဘာလုပ်တတ်သလဲ မေးရာ၊ နောက်ပြန်ဂျွမ်းထိုးတတ်သည်ဟု ဖြေလိုက်ရာ၌ စတန့်သမားမပါဘဲ လူကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့။
ဘက်လင်တန် တယ်ရီယာ အမျိုးအစား စုတ်ဖွားခွေးတကောင် မွေးထား။
ဂျီသည် ဂီတဇာတ်ရုံ၌ စတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ရုပ်ရှင် နေ့ရက်များစွာ... ၌ ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီး နှလုံးသားဝှက်သူ(၂၀၀၈)ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ၌ မထင်မရှားဇာတ်ရုပ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ရုပ်ရှင် အိပ်ပျော်နေသောမိန်းမလှ ၌သာ တရားဝင် ပွဲဦးထွက်သည်။
၂၀၀၉ ၌၊ ပြည့်စုံလွန်းတဲ့သားတွေ ဇာတ်လမ်းတွဲ၌ ပါပြီး၊ သိမ်မွေ့ပြီး မိန်းမဆန်သော ညီအထွေးဆုံးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ကာ အသက် ၂၀ အရွယ်၌ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း၏ သမီးကို မွေးမြူခြင်းနှင့် အဆုံးသတ်ထားသည်။  ထို့နောက် အက်ရှင်ဟာသဇာတ်လမ်းတွဲ ဟီးရိုး ၌ ဇာတ်ပို့ပါဝင်သည်။
၂၀၁၀ ၌ ၁၅၉ ပိုင်းပါ ထပ်ပြုံး ၌ စတင်ပါဝင်သည်။ ကိုရီးယားအမေရိကန် ရေခဲစကိတ်ပတ်လမ်းတိုပြိုင်ပွဲဝင်အဖြစ်နှင့် ရေခဲစကိတ်ကွင်း၌ တနေ့လျှင် လေးငါးနာရီ လေ့ကျင့်ခဲ့ရသည်။ ထပ်ပြုံးသည် ၁၅ ပတ်ဆက်တိုက် ဘုတ်တွင် ထိပ်စွဲပြီး ကေဘီအက်စ်ရုပ်သံဆုပေးပွဲ၌ အကောင်းဆုံး နေ့စဉ်ရုပ်သံမင်းသားဆုကို သူသည် ချီးမြင့်ခံရသည်။
ထို့နောက် ၂၀၁၁ အက်ရှင်-သမိုင်းနောက်ခံဇာတ်လမ်းတွဲ စစ်သည်တော်ဘက်ဒုန်းဆူ ၌ အမည်ခံဇာတ်ရုပ်၌ ပါဝင်သည်။ မူလက လီဂျေဟော်၏ ကာတွန်းဇာတ်လမ်း ဂုဏ်သရေရှိဘက်ဒုန်းဆူ ကို မှီငြမ်းထားသော ၎င်းသည် ဂျိုဆွန်းခေတ် ဓားသမား ဘက်ဒုန်းဆူဆိုသူသည် ငယ်စဉ်မှ ကြီးပြင်းလာသည့်တလျှောက်တွင် နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားလာသည်မှ ငယ်ကျွမ်းဆွေ တဖြစ်လဲ ရန်သူနှင့် ရင်ဆိုင်ရပုံ အကြောင်း ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။  ထိုဇာတ်လမ်းတွဲသည် ရုပ်သံလွှင့်အစီအစဉ်၌ ၁၃ ပတ်တာ နံပါတ်တစ် ဖြစ်ပြီး၊ ဂျီသည် အက်စ်ဘီအက်စ်ရုပ်သံဆုပေးပွဲ၌ မျက်နှာသစ်ဆုကို ရရှိသည်။  ထိုနှစ်နောက်ပိုင်း၌ အခပေးရုပ်သံ လူပျိုကြီးရဲ့ဟင်းရွက်ဆိုင် ဇာတ်လမ်းတွဲ၌ အဓိကဇာတ်ရုပ်အဖြစ် ပါပြီး၊ ဖြစ်ရပ်မှန်အောင်မြင်သူတယောက်အကြောင်း အခြေခံထားကာ သေးနုတ်သော စတုရန်းပေ ၃၅၀ ရှိ ဟင်းရွက်ဆိုင်ကို ၁၉၉၈ ၌ စတင်ခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံတဝန်း ဆိုင်ကြီး ၃၃ ဆိုင်အထိ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပုံအကြောင်းဖြစ်သည်။
ပထမဆုံးဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်အနေနှင့်မူ၊ အစ်ကိုဖြစ်သူ၏ ဂီတပါရမီကို မနာလိုခဲ့သော တယောသမားအဖြစ် ၂၀၁၂ ဇာတ်မြူး လက်ငါးချောင်း ၌ ပါဝင်ခဲ့သည်။ 
၂၀၁၃ ၌ နေ့ရက်များစွာ ၌ သမ္မတသက်တော်စောင့်အဖြစ် ကဇာတ်ရုံသို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ ကင်ကွမ်ဆော့၏ ရိုးရာ ရော့ခ်သီချင်းကို အသုံးပြုပြီး တဆန်းသစ်ထားသော ပြဇာတ်ဖြစ်လေသည်။ 
၂၀၁၃-၂၀၁၇၊ ပြည်ပထိ ထိုးဖောက်ခြင်း [ပြင်ဆင်ရန်]
သမိုင်းနောက်ခံဇာတ်လမ်း ဘုရင်မကြီးကီ ၌ ယွမ်မင်းဆက် ၁၆ ကြိမ်မြောက် ဧကရာဇ် ဟွေကျုံဟုလည်းသိသော တော့ဟောတယ်မွာ အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ကာ တဟုန်ထိုး ကျော်ကြားလာသည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲသည် နိုင်ငံအဝန်း ကြည့်ရှုသူများ၏ အမှတ်ပေးခြင်း ခံရပြီး၊ ၂၅.၁၂ ရာခိုင်နှုန်းထိ ရရှိခဲ့သည်။ ဘုရင်ငယ်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ပီပြင်မှုက ဝေဖန်ရေးသမားများနှင့် ပရိသတ်များစိတ်ထဲ ကြီးစွာ အကောင်းမြင်ခံရပြီး၊ များစွာ ချီးကျူးခံရသည်။ ထိုင်ဝမ်၌ ပထမဦးဆုံးသော ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲ လုပ်သည်။
ဆုန်းဂျီနာ ရေးသားသော ထိတ်လန့်အက်ရှင် ဟီးလား၌ ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာမှ ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီအထိ အဓိက သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ၌ လျှို့ဝှက်သော ကြေးစားသမားဇာတ်ရုပ်အတွက် သိုင်းသင်ခဲ့သည်။  ဇာတ်လမ်းတွဲ လွှင့်ပြီးသော် ဂျီသည် တရုတ်နှင့် အာရှအတော်များများ၌ လူကြိုက်များသွားလေသည်။ ၂၀၁၅ တွင် ဝေးပေါ်အကောင့်ဖွင့်ပြီး ဖန်များကို လက်ခံရာ နှစ်လမပြည့်မီအတွင်း၌ ဖန်ပေါင်း တသန်းကျော်လေသည်။ ထို့ပြင် ၂၀၁၅ ကိုရီးယားမီဒီယာများက ပြုလုပ်သော ချစ်သူများနေ့မှာ ဘယ်ကိုရီးယားအမျိုးသားသရုပ်ဆောင်နဲ့ အချိန်းတွေ့ချင်ဆုံးလဲ မဲပေးလှုပ်ရှားမှု၌ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲ၏ အကျိုးဆက်ကြောင့် နံပါတ်တစ် ရသည်။  ထို့နောက်တွင် လေပွေမိန်းကလေး ၂ နှင့် မစ္စတာရိုက် တရုတ်စကားပြောဇာတ်လမ်းတွဲ၌ ပါဝင်သည်။
၂၀၁၆ ၌၊ တီဗီအင်၏ အက်ရှင်သဲဖို ကေတူး၌ နောက်လိုက်များ၏ သစ္စာဖောက်ခြင်းခံရပြီး လူတွေကို ကြောက်သော မိန်းကလေးနှင့် ချစ်ကြိုက်သည့် သက်တော်စောင့်အဓိကဇာတ်ရုပ်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်သည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲသည် ထုတ်လွှင့်သည် ၈ ပတ်လုံးလုံး အခပေးရုပ်သံ ကြည့်ရှုနှုန်း၌ ထိပ်စွဲခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ ၌ လိုတီဂျူတီဖရီးဆိုင်အတွက် ပထမအနမ်းခုနှစ်ခါ အမည်ရ ပရိုမိုးရှင်း ဝဘ်ရုပ်သံ၌ ပူးတွဲရိုက်ကူးသည်။
၂၀၁၇ ၌ အက်ရှင်ဇာတ်ကား ဖြစ်သော လံကြုပ်မြို့ကြီး ၌ အလုပ်မရှိသော ဂိမ်းစွဲနေသူတဦး ဘဝမှ နာမည်ကြီးလူသတ်သမား ဖြစ်လာပုံ သရုပ်ဆောင်သည်။  နောက်ထပ်ရိုက်ကူးသည့် အက်စ်ဘီအက်စ်၏ ရို-ဟာ-ဖို ဇာတ်လမ်းတွဲ ဒီမိန်းမကို စောင့်ကြည့်ထား သည် မေလ၌ အစမ်းပြရန် စီစဉ်ထားသည်။ (Ji is also set to star asareckless rookie constable alongside Sol Kyung-gu's apathetic veteran officer in the period-comedy film Two Constables, the fourth installment in the Two Cops franchise directed by Kang Woo-suk...)
The K2 Kim Je-ha tvN
2013 How to Use Guys with Secret Tips Hong-jun's brother Guest role
2014 KARA: Secret Love Angel No. 2013 (Ep.9and 10)
2016 First Seven Kisses Ji Chang-wook (Ep. 3-4) Naver TV Cast
2013 Radio Star MBC Guest, episode 322
2014 Running Man SBS Guest, episodes 211-212
2015 Happy Camp HBS Guest
2016 Taxi tvN Guest, episode 445
We Got Married MBC Guest, episode 347
2009 "Falling You" T-ara
Composed of three short plays: Moon Story, Sandglass, That's Right!
Jukebox musical featuring songs by late folk-rock singer Kim Kwang-seok.
Starred in the musical's first run from April to September 2013.
Reprised his role for the musical's second run from October 2014 to May 2015, December 2015.
2016: Be With You (Japanese)
2011 "Meet Again" track from Warrior Baek Dong-soo OST
(with Lee Kwang-soo, Kim Young-kwang, Shin Won-ho, Sung-je, and Ji-hyuk)
tracks from Bachelor's Vegetable Store OST
2012 "Fill Up" track from Five Fingers OST
2014 "To the Butterfly" track from Empress Ki OST
2015 "I Will Protect You" track from Healer OST
2016 "Kissing You" track from First Seven Kisses OST
2011 4th Korea Drama Awards Best New Actor Smile Again ဆန်ကာတင်
KBS Drama Awards Excellence Award, Actor inaDaily Drama ဆုရရှိ
SBS Drama Awards New Star Award Warrior Baek Dong-soo ဆုရရှိ
2012 Excellence Award, Actor inaWeekend/Daily Drama Five Fingers ဆန်ကာတင်
2013 7th The Musical Awards Best New Actor The Days ဆုရရှိ
MBC Drama Awards Excellence Award, Actor inaSpecial Project Drama Empress Ki ဆုရရှိ 
7th Korea Drama Awards Top Excellence Award, Actor ဆန်ကာတင်
3rd APAN Star Awards Excellence Award, Actor inaSerial Drama ဆန်ကာတင်
KBS Drama Awards Excellence Award, Actor inaMid-length Drama Healer ဆန်ကာတင်
Best Couple Award with Park Min-young ဆုရရှိ
2015 4th APAN Star Awards Excellence Award, Actor inaMiniseries ဆန်ကာတင်
Anhui TV Drama Awards Most Popular Actor (Overseas) ဆုရရှိ 
2016 1st Asia Artist Awards Popularity Award The K2 ဆန်ကာတင် 
31st Korea's Best Dresser Swan Awards Best Dressed Actor N/A ဆုရရှိ 
↑ ၁.၀ ၁.၁ Ji Chang-wook's profile (in Korean)။ 15 January 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2015-01-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jin၊ Young-ju (16 September 2009)။ My Too Perfect Sons Records Viewer Ratings of 43.3 Percent။ KBS Global။ 12 July 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2013-08-31 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Yoon၊ Seo-hyun (28 September 2010)။ Trace the steps of your favorite drama stars။ TV Report။
↑ Kim၊ Heidi (16 May 2011)။ Smile Again wraps up after commanding TV charts for 15 weeks။ 10Asia။ 2012-11-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hong၊ Lucia (2 January 2012)။ Shin Ha-kyun scores top prize at 2011 KBS Drama Awards။ 10Asia။ 2012-11-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kim၊ Hee-ju (20 June 2011)။ On the set of SBS TV series The Warrior, Baek Dong-soo။ 10Asia။ 2012-11-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Han၊ Yeo-wool (6 September 2011)။ SBS series The Warrior, Baek Dong-soo extended by6episodes။ 10Asia။ 2012-11-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hong၊ Lucia (12 October 2011)။ The Warrior Baek Dong-soo bows out atop Mon-Tues lineup for 13th win။ 10Asia။ 2012-11-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kim၊ Jessica (2 January 2012)။ Han Suk-kyu reclaims glory at SBS Drama Awards။ 10Asia။ 2012-11-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Choi၊ Eun-hwa (15 December 2011)။ Ji Chang Wook On Always Being the Good Guy။ enewsWorld။ 29 January 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2012-11-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Choi၊ Eun-hwa (4 July 2012)။ Five Fingers Confirms Cast with Joo Ji Hoon and T-ara's Ham Eun Jung။ enewsWorld။ 8 July 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2012-11-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hong၊ Lucia (24 July 2012)။ Poster of Ju Ji-hoon, T-ara Hahm Eunjung's TV series unveiled။ 10Asia။ 2012-11-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kwon၊ Mee-yoo (21 February 2013)။ Emptying nostalgia's vault။ The Korea Times။ 2013-04-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ji Chang-wook Cast in Ha Ji-won's New Historic Series။ Naver Corporation (5 September 2013)။
↑ Chung၊ Joo-won (2 May 2014)။ Ji Chang-wook benchmarks Kim Soo-hyun, Lee Min-ho over Asia။ The Korea Herald။ 2014-05-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Baek၊ Byung-yeul (18 May 2014)။ Leaping toward stardom: Empress Ki actor outshines Ha Ji-won with breakthrough role။ The Korea Times။ 2014-05-20 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ji shows off his range in ‘Healer’ (26 February 2015)။ 16 February 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 March 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ji Chang-wook leaps to new heights through ‘Healer’ (12 February 2015)။
↑ Ji Chang Wook Sees Rise in Popularity Overseas After ′Healer′။ MWave (14 March 2015)။ 14 August 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 March 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ji Chang-wook’s popularity soars in China။ The Korea Herald (3 February 2015)။
↑ Ji Chang-wook to star in Chinese drama။ The Korea Heral (29 February 2016)။
↑ Ji Chang-wook is the new ‘Mr. Right’။ The Korea Herald (26 January 2016)။
↑ Ji Chang-wook confirms lead in ‘K2’ (28 July 2016)။
↑ Rumy Doo။ "‘K2’ wraps up with top ratings"၊ The Korea Herald၊ November 13, 2016။ November 14, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "[단독이종석•이준기•지창욱•박해진 뭉쳤다…'첫키스만 여섯번째' 출연]"၊ Naver Corporation၊2November 2016။
↑ Ji Chang-wook findsafitting film : A lead role in the action hit ‘Fabricated City’ wasafirst for the young star (15 February 2017)။
↑ 지창욱, SBS 새 수목 '이 여자를 조심하세요' 출연 확정 (공식입장)။ Xports News (16 March 2017)။ 17 March 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 March 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ '기황후' 하지원, MBC연기대상 대상..7년만에 2번째 대상(종합) (31 December 2013)။
↑ 国剧盛典拉下帷幕 胡歌范冰冰分获视帝视后_网易娱乐 (2 January 2016)။
↑ AAA။ Asia Artist Awards (2016-11-12)။7May 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2016-12-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 지창욱부터 윤아까지 ‘베스트드레서 스완어워드’ 16人 수상자 확정(공식입장) - 손에 잡히는 뉴스 눈에 보이는 뉴스 - 뉴스엔။ Newsen.com (11 December 2016)။ 2016-12-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျီချန်ဝု&oldid=674930" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၂:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။